सोलुखुम्बु बोलेरो दुर्घटनाले उब्जाएको तीन शंका – Sagarmatha Online News Portal
Wednesday September 23, 2020 |
सोलुखुम्बु बोलेरो दुर्घटनाले उब्जाएको तीन शंका
बोलेरो जीप दुर्घटनाका १० हृदयविदारक तस्वीर
सोलुखुम्बु । नेचासल्यान गाउँपालिका वडा नं. २ सल्यानबाट सदरमुकाम सल्लेरी तर्फ जाँदै गरेको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा बोलेरोमा सवार सातै जनाको मृत्यु भएको छ । ६ जनाको दुर्घटना स्थलमै मृत्यु भएको थियो भने एक जनाको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा मृत्यु भएको छ ।
बोलेरो दुर्घटनालाई लिएर विभिन्न किसिमका शंका, उपशंका र अड्कलबाजी लगाउँन थालिएको छ । कसैले सवारी साधनलाई दोष लगाएका छन्, त कसैले चालकलाई । अनि कसैले बाटोलाई । दुर्घटना हुने मुख्य कारण पनि यी तीनैमध्ये एक हो । राम्रो बाटो र सीपालु चालक भएर मात्र हुँदैन ? यदि सवारी साधन ठीक छैन भने कुनै न कुनै समय बिग्रिन सक्छ । तेर्सोबाटोमा बिग्रियो भने त ठीकै हो, तर उकालो र ओरालो बाटोमा बिग्रियो भने त दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ?
यी तीन कारणलाई विश्लेषण गर्दा यीमध्ये एक कारणले गर्दा दुर्घटना भएको अनुमान लगाउन त्यत्ति गाह्रो नहोला । यी तीन कारणलाई विस्तृत रुपमा यसरी विश्लेषण गरिएको छ ।
शंका नं. १
सबैभन्दा पहिले त सवारी साधन ठीक हुनुप¥र्यो । अनि मात्र चालक र बाटोको विषय हुन सक्छ । यदि सवारी साधन ठीक छैन भने कुनै न कुनै बेला साधन बिग्रिन सक्छ । त्यसैले सवारी साधन ठीक छ की छैन भनेर समय समयमा जाँच गराउँनु पर्छ ।
तिङ्लाको महादेव भीरमा भएको बोलेरो दुर्घटनामा पनि सबैभन्दा पहिलो शंका सवारी साधनको अवस्था कस्तो थियो भन्ने प्रश्न उब्जिन स्वभाविक छ । दुर्घटना स्थलको बाटोलाई हेर्दा अप्ठ्यारो बाटो पारगरी दम्साईलो उकालोमा दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा सवारी साधनको अवस्थाप्रति शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु भेटिन्छन् ।
नेचासल्यान गाउँपालिकाको सीमाना समाप्ती पश्चात करिब दुई किलोमिटर बाटो त्यो क्षेत्रकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो र कठिन छ । महादेवको मन्दिरलाई तल र माथिबाट बाटोलाई अप्ठ्यारो तरिकाले घुमाइएको छ । जसले त्यो क्षेत्रमा सजिलै सवारी साधन चलाउन चालकलाई कठिन र साहास चाहिन्छ ।
गएको साउन महिनादेखि उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनले ६/६ महिनामा र नीजि सवारी साधनलाई १ वर्षमा एक पटक प्रदुषण जाँच गराउने नियम छ । अहिले उपत्यका लगायत देशभरका महानगर र उपमहानगमा ४० वटा मेसिनले डिजेल गाडीको प्रदुषण जाँच गर्ने ‘स्मोक मिटर’ र पेट्रोल गाडीको प्रदुषण जाँच गर्ने ‘ग्याँस एनालाइजर’ को प्रयोग गरी यातायात विभागले सवारी साधन जाँच गरिरहेको छ । तर कच्ची र पहाडी बाटोमा चल्ने सवारी साधनहरुको कति समयमा जाँच गरिन्छ ? अनि केहि समस्या आए त्यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्ने वर्कशपसम्म पु¥याउन सकिन्छ त ? यी र यस्ता समस्याहरु यावत रुपमा यत्रतत्र छरिएर रहेका छन् ।
शंका नं. २
बोलेरो दुर्घटनाको दोस्रो शंका कच्ची र साँघुरो बाटोलाई लिन सकिन्छ । सवारी साधन र चालक राम्रो भएर मात्र हुँदैन । यदि बाटो नै अप्ठ्यारो भयो भने चालक र सवारी साधनको सानो गल्तीले पनि ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । गुप्तेश्वर महादेव भीरमा भएको दुर्घटनामा पनि अप्ठ्यारो बाटोका कारण भएको हो भन्ने अड्कल लगाउँदा अस्वभाविक हुँदैन ।
सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लालाई जोड्ने क्षेत्रिय सडकको रुपमा समेत विकास गर्दै लगिएको यो सडक भौगोलिक र प्राविधिक रुपमा त्यत्ति उपयुक्त छैन । यो सडकलाई प्राविधिक रुपमा भन्दा पनि केहि व्यक्तिको स्वार्थ अनुरुप विस्तार गरिएकाले जुन आकारमा सडकको ट्रयाक खोल्नु पर्ने हो त्यत्ति मात्रमा सडकको चौडाई छैन । जसको कारण दुर्घटना बढि हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
नेपालको प्रायः सबै क्षेत्रमा खनिएका अधिकांश सडकहरु न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि खनिएकाले दुर्घटनाहरु भइरहन्छन् । जुनसुकै क्षेत्रमा सडक खन्दा प्राविधिक रुपमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गरी खन्नु पर्छ । तर सोलुखुम्बुमा पछिल्लो समयमा खनिएका कुनै पनि सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङन त कता हो कता सामान्य प्राविधिक र भौगोलिक अवस्थालाई समेत वास्ता नगरी मनलाग्दी रुपमा खनिएका छन् । त्यसैको कारण पनि यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरु दोहोरी रहन्छन् ?
शंका नं. ३
राम्रो बाटो र कण्डिसनको सवारी साधन मात्र भएर हुँदैन । चालक पनि अनुभवी र दक्ष हुनुपर्छ । यो दुर्घटनामा चालकको पनि गल्ति हुन सक्छ । दुर्घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा अप्ठ्यारो बाटो पार गरी दम्साईलो उकालोबाट गाडी दुर्घटनामा परेको छ । जसले चालकलाई पनि दुर्घटनाको कारण हो की भन्ने शंका लगाउनु स्वभाविक हुन्छ ।
यो दुर्घटनालाई हेर्दा चालकको लापर्वाही, कमजोरी वा गल्तीले भएको शंका गर्ने केहि कारणहरु छन् । किनभने अप्ठ्यारो बाटो पारगरी सो क्षेत्रको केहि सजिलो बाटोमा दुर्घटना भएको छ ।
तस्वीरः सन्तोष राउत/प्रकाश गाउँले
यी तीन शंकालाई दुर्घटना पश्चात उद्धारमा खटिएका उद्धारकर्मी र दुर्घटनाको प्रकृतिलाई हेरेर उब्जिएका स्वभाविक अनुमान र आँकलनहरुको रुपमा व्याख्या गरिएको हो । विकास र समृद्धिको नाममा न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरि गरिएका विकासले यस्ता दुर्घटना निम्त्याई रहेका छन् । त्यसैले विकास र समृद्धि हतारमा होइन, प्राविधिक र मापदण्ड अनुसार नै बनाउँदा सबैलाई राम्रो होला की ?
माप्यदुधकोशी ५ का वडाध्यक्ष तामाङको निधन
मानव अधिकारबारे प्रशिक्षण उपत्यकाका २४३ वटै प्रहरी युनिटहरुमा
नेपाली भूमिमा भवन बनाएका छैनौं चीन
उपत्यकामा मात्रै ६४७ जना, १३५६ संक्रमित थपिए,
परिवारको आरोप ,कैदीको हत्या गरिएको, मृतक कोरोना संक्रमित